MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA EEYAHA DOORKA DAHABKA AH - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirrada eeyaha Doorka Dahabka ah
Dahab Golden / Dogs Noocyada Isku Dhafan ee Dahabka ah
'Lola waa 7 bilood jir Feedhyahan / Dahab dahab ah isku dar. Hooyadeed waa Dahab aabbeheedna waa Feeryahan. Markay tahay 7 bilood miisaankeedu waa 55 rodol. Iyadu waa eey aad u macaan oo aan dagaal badan ku jirin haba yaraatee. Waxay jeceshahay inay dhuuqdo oo ay seexato meel kasta. Way ku fiican tahay gaariga waxayna jeceshahay carruurta. Waxaan ukeennaa iskuulka wiilasheena fasalka 4aad 3-4 jeer usbuucii iyo caruurta kulligood iyada jecel. Carruurta oo dhan way u oggolaanaysaa iyada. Qofka kaliya ee ay waligeed u ciyeysaa waa boosta, laakiin markaa ... iyadu waa eey! Waxay ubaahantahay jimicsi badan waxayna kugula socodsiineysaa adiga oo kugu garaacaya (feedhka) cagihiisa waaweyn. Ilaa iyo inta ay saacad socod ku hesho maalin kasta si wanaagsan ayey u dhaqantaa. Labada jeer waxaan socodkeeda ayay seegtay kabo ayey cuntay. Dhakhtarkayagu wuxuu noo sheegay inaan ka filayno inay culeyskeedu yahay 65-85 lbs markay weynaato. '
Feeryahan Dahab ah
Feedhka Dahabka ahi ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Dahab dahab ah iyo Feedhyahan . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta oo aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
'Kani waa Rusty, Eygeyga Feerka Dahabka ah. Illaa iyo hadda, markay tahay 8 toddobaad, wuxuu umuuqdaa inuu yahay eey aad u wanaagsan. Isagu waa nin caqli badan oo dabeecad wanaagsan. Wuxuu durba bartay la soo noqoshada waxyaabaha markaan wax tuurayo. Sidoo kale wuxuu ku fiican yahay carruurta iyo xayawaannada kale. Aad ayaan uga helay isaga.
Rusty Feeryahanka Dahabka ah sida eey yar oo ah 8 toddobaad
Eyga Dahabka Feer-dahabka ah - hooyadu waa huruud-celiyayaal dahabi ah oo eey dabiici ah, aabuhuna waa feeryahan caan ah oo feeryahan ah.
american bulldog 1 sano jir
shaybaarka madow ee adhijirrada australia
sawirada isbaanishka bakhaarka madow
10 usbuuc oo yar yar oo ah eey yar yar ah
chihuahua chinese dhaldhalaal eeyo isku dhafan